Kulamo xal loogu raadinayo Mooshinka Wasiir Xoosh oo xalay ka dhacay Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Kulamo xal loogu raadinayo Mooshinka Wasiir Xoosh oo xalay ka dhacay Muqdisho
Kulamo xal loogu raadinayo Mooshinka Wasiir Xoosh oo xalay ka dhacay Muqdisho
Waxaa socda dadaalo kala duwan oo lagu doonaayo in lagu xaliyo Mooshinka ay wadaan xubnaha ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ay ku doonayaan in ay dib u eegis ku sameeyaan xil heynta Wasiirka Arrimaha Dastuurka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jabriil.
Dadaalada hada socda oo uu soo farageliyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa la sheegay in looga gol leeyahay in la baajiyo in xilka laga qaado Wasiir Xoosh oo ka mid ah xukuumadda Khayre.
Xildhibaanada wada ololahan qaarkood ayaa kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya waxayna u sheegeen in aysan ka noqoneyn go’aanka ay ku doonayaan in ay kula xisaabtamaan Wasiirka Dastuurka oo Axadii Todobaadkan ka cudur daartay in uu hortago Baarlamaanka Soomaaliya markii ay u yeereen, sidoo kalena bogiisa Twitter-ka uu ku soo qoray hadal muujinaya go’aan ay Baarlamaanka gaareen in uu ahaa mid qaldan, taasi oo keentay xasaasiyada Baarlamaanka ay qaadeen.
Dastuurka Soomaaliya ayaa cadeynaya qodob ka mid ah sababaha Baarlamaanka Soomaaliya ay xilka uga qaadi karaan masuul xukuumadda ka tirsan hadii uu imaan waayo Baarlamaanka marka loo yeero.
Qodobka hada lagu heysto ama sharci ahaan u qabanaya Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jabriil ayaa ah qodobka 69-aad faqradiisa C oo dhigaya u yeerida Ra’iisul Wasaaraha, xubnaha Golaha Wasiirada, Gudoomiyeyaasha Guddiyada Qaranka iyo xafiisyada madaxa banaan, masuul kasta oo u hoggaan sami waaya u yeerida wuxuu Golaha shacabka awood u leeyahay in uu dib u eegis ku sameeyo xilkiisa.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay xildhibaanada in uu u sheegay in ay ka laabtaan Mooshinkaas, maadaama xukuumada Khayre ay jirto mudo ku siman Afar bilood, horma kala duwana uu socdo, hadii Baarlamaanka ay xilka ka qaadaan Wasiir Xoosh, taasi ay niyad jab ku keeneyso xukuumadda.
Lama garanayo hadii xildhibaanada wada ololaha ka dhanka ah Wasiir Xoosh ay ku adkeysteen in ay la xisaabtamayaan Wasiirka Dastuurka, isla xisaabtankaas oo ay u marayaan wado sax ah.
Shalay oo lagu balansanaa in Baarlamaanka Soomaaliya ay go’aan ka gaaraan arrinta dood ka dhex dhalisay xildhibaanada ee Wasiir Xoosh ayaa kulanka waxa uu u baaqday kooram la’aan.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qudhooda ku kala qeybsan arragtida lagu doonayo in lagula xisaabtamo Wasiir Xoosh oo xildhibaanada qaar waxa ay qabaan in Wasiirka la iska daayo, halka qaarkoodna ay qabaan in Wasiirka aanan la sii deyn oo sharciga la marssiyo.
Culesyka ugu badan ayaa waxa uu ka imaanayaa xildhibaanada kuraastooda uu muranka ka taagan yahay kuwaasi oo gadaal ka riixaya xildhibaanada kale si marnaba aanan loo soo hadal qaadin kuraastooda uu muranka ka taagan yahay iyo damaca ay qabaan siyaasiyiintii ku doodeysay in kuraastaasi si sharci daro ah lagu boobay, inkastoo Baarlamaanka Soomaaliya qodobkaasi ay laaleen.